Birta birta ah ee ugu khafiifsan adduunka waa 0.015 mm oo dhumuc ah: oo laga sameeyay Shiinaha - China Foshan Hermes Steel
Birta birta ah ee ugu khafiifsan adduunka waa dhumucda 0.015 mm oo keliya: oo laga sameeyay Shiinaha
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee CCTV, “birta jeexjeexan” ee ugu dambeysay oo ay soo saartay China Baowu Taiyuan Iron and Steel Group ayaa ka dhuuban warqad, muraayad u eg, aadna ugu adag qaab dhismeedka. Dhumucdiisuna waa kaliya 0.015 mm. Xidhmada 7 go 'oo bir ah waa wargeys. dhumucdiisuna.
Waxaa la soo wariyay in kani yahay birta ugu khafiifsan adduunka hadda, waxaana laga yaabaa in loo adeegsado sidii qalab wax lagu farsameeyo ee chip -ka mustaqbalka, sidaa darteed waxaa sidoo kale loogu yeeraa "chip steel."
Si aad u samaysato noocaan "birta birta ah", furahu wuxuu ku jiraa diyaarinta iyo isku -darka rollers -ka bareega. Kooxda Baowu Taiyuan Iron and Steel Group waxay samaysay 711 tijaabo waxayna isku dayday in ka badan 40,000 oo nooc oo rollers biriiga ah muddo laba sano oo buuxa ah. Ka dib markii suurtogalnimada iyo isku -darka suurtagalka ah, iridda birta ah ee birta ah ayaa loo sameeyay dhumucdiisuna tahay 0.02 mm, taasoo jebisay keli -taliskii teknolojiyadda shisheeye.
Bilowgii bishii May ee sannadkii hore, Taiyuan Iron iyo Steel ayaa sii waday inay sii waddo cilmi -baarista sayniska iyo farsamada iyada oo ku saleysan, ka dib ku dhawaad ​​boqol tijaabo, waxay aakhirkii qodday birtii birta ahayd 0.015 mm.
Ka sokow hawsha guntinta, “birta birta ah” ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa dareemayaasha aerospace beerta, baytariyada alaabta tamarta cusub, iyo shaashadaha isku laabma taleefannada gacanta.
Waqtiga dhejinta: Aug-30-2021